उड्नुअघि यात्रुको टेलिफोन ः काठमाडौँको मौसम कस्तो छ ? मैले ठिकै छ, घाम लागिरहेको छ दाइ’ भनेको थिएँ तर…! – Etajakhabar
प्रकाश सिलवाल , काठमाडौँ, २८ फागुन – ‘मध्याह्न बाह्र बजेतिर फोन गरेर काठमाडौँको मौसम कस्तो छ बहिनी भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले ठिकै छ, घाम लागिरहेको छ दाइ’ भनेको थिएँ तर…’ यति बोलेपछि निर्मला बोहराको गला अवरुद्ध भयो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार दिउँसो दुर्घटनाग्रस्त विमानमा घाइतेलाइ उपचारको क्रममा नर्भिक अस्पतालबाट ग्रान्डी अस्पतालमा लादै । तस्बिर ः नवीन पौडेल रासस
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २८, २०७४ समय: २२:०२:५८